ओलीको शक्ति प्रदर्शनमा व्यापक जनमास, 'सूर्य चिन्ह अब ओली समूहको !' | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal ओलीको शक्ति प्रदर्शनमा व्यापक जनमास, 'सूर्य चिन्ह अब ओली समूहको !' | एक्सप्रेस | GNN Nepal
ओली समूहको आमसभामा केके भयो ?
ओलीको शक्ति प्रदर्शनमा व्यापक जनमास, ‘सूर्य चिन्ह अब ओली समूहको !’
माघ २३ गते, २०७७ १९:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ओली समूहले काठमाडौंमा बृहत् जनसभा सम्पन्न गरेको छ । बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको उक्त सभामा देशभरका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । सभालाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा उनीहरुले यो सभाले को आधिकारिक नेकपा हो भन्ने पुष्टि गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
ओली समूहको आमसभामा व्यापक जनमास, के सन्देश दिँदैछन् ओली ?
शुक्रबार बिहानै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको अगाडि धुमधामका साथ सरसफाइ चलिरहेको थियो । संग्रहालय अगाडि सडकमा राखिएका फलामका डिभाइडरहरु हटाइएको थियो । कारण जनमासलाई जनसभा हेर्न कुनै समस्या नहोस् । संग्रहालय अघि ठूलो स्टेज बनाउने तयारी पनि उत्तिकै धुमधामका साथ चलिरहेको थियो । सडक सफा थियो किनभने बिहानै सरकारी पानीका गाडीहरु सडक बढार्नमै व्यस्त थिए । नारायणहिटीको बाटो भएर जानेआउने तिनैओटा सडक बन्द गरिएको थियो । सडक सुनसान थिए । सडकका पोलपोलमा ओलीका तस्बिरहरु झुण्ड्याइएका थिए । सडकका छेउछाउ पनि सोही तरिकाले सिँगारिएका थिए । दिनको १२ बजे आयोजना हुने भनिएको जनसभा निर्धारित समयमा भने सुरु हुन सकेन । करिब साढे १ बजेतिर जनसभा सुरु भयो । जनसभाको दायाँपट्टि शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरुलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
जनसभामा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट आउने जुलुसहरुले ठाउँ खचाखच भइरहेको थियो । जनमास ह्वात्तै बाक्लिएको थियो । त्यसपछि साइरन बजाउँदै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रवेश गरे । स्टेजबाट बन्द सडकका तिनै ठाउँमा बसिरहेको जनमासलाई हात हल्लाए । जनमासको ठूलो आवाज बेस्सरी ब्युँतियो । त्यसो त ओली समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको जनसभामा जनसहभागिता भने उल्लेख्य थियो । देशभरका नेता तथा कार्यकताहरुको हेर्न लायक सहभागिता देखिन्थ्यो । यही मासलाई लिएर ओलीले प्रचण्ड नेपालप्रति व्यङ्ग्य गरे– ‘सडकमा २/४ हजार मान्छेहरु जम्मा गरेर ओलीले यो भिड हेरे हुन्छ भन्दै फुइ लाउनेहरुले देख्यौ होला नि जनसभा कस्तो हुन्छ भनेर ।’
ओली समूहको सभामा जम्मा भएको यो जनमासले निर्वाचन विकल्प नरहेको प्रष्ट रुपमा खुलाएको छ । किनभने ओलीले स्टेजमा बोलेका हरेक बोलीमा सडकबाट एउटै आवाज आइरहेको थियो– ‘केपी ओली जिन्दावाद, चुनाव चाहियो, चुनाव चाहियो ।’ कतिपयले ओलीले जनसभाका लागि नारायणहिटी नै रोज्नुमा गम्भीर रहस्य रहेको उल्लेख गरिरहेका छन् । जुन राजतन्त्रको पुर्नबहाली हुनसक्छ । तर उनले यो कुरा सिधै इन्कार गरेका छन् । उनले राजतन्त्र कुनैपनि हालतमा नफर्किने प्रष्ट पारे ।
साथीहरु एकछिन शान्त भइदिनुहोस्
जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मञ्चमा ठूलो स्वरमा बोलिरहेका थिए । त्यतिकैमा सडकमा कलेटी पसेर बसिरहेका नेता तथा कार्यकताहरुबाट झनै ठूलो आवाज गुञ्जियो । ‘केपी ओली जिन्दावाद, केपी ओली जिन्दावाद, केपी ओली…’
त्यसपछि ओली रोकिए । त्यति ठूलो आवाज सुनेर उनी अचम्मित परे । बीचमा बोल्ने प्रयास गरेका थिए तर सकेनन् । त्यतिबेला पनि उनी समर्थकले उनको पक्षमा नारा लगाइरहेका थिए । उनले तातो पानी पिए । त्यसपछि उनले भने, ‘साथीहरु एकछिन शान्त भइदिनुहोस त’ उनीहरु त्यसपछि पनि शान्त भएनन् । अनि उनको केही सिप लागेन । उनले आफू उभिएको पोडियमतिर हेरे । त्यसपछि जनआवाज शान्त भयो । उनी अघिकै शैलीमा बोल्न सुरु गरे ।
जनमासको आवाज – ‘सूर्य चिन्ह अब केपी ओलीको !‘
जनसभामा एकै स्वर थियो कि अब सुर्य चिन्ह केपी ओली पक्षकै हुनेछ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक नम्बर अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्, महासचिव पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ, यो बाहेकका अन्यथा व्यक्तिले गरेका निर्णय बैधानिक हुँदैनन्’, सभामा सम्मिलित एक सहभागीले भने । ‘त्यसैले हामी ढुक्क छौँ , सूर्य चिन्ह हामीले नै पाउने छौँ ।’ जनमासको संदेश पनि अब यहि नै हो कि आधिकारिक हामी हो । प्रमाणित भैसक्यो ।’ तथापि चिन्ह कसको हुनेछ भन्ने अन्तिम फैसला निर्वाचन आयोगले गर्ने नै छ।
अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअघिको स्टेजमा बृहत् जनसभालाई सम्बोधन गरिरहेका ओलीको आवाज तिखो थियो । उनी सम्बोधनको अन्त्यतिर पुग्नै लागेका थिए । सोही क्रममा उनलाई प्रचण्ड नेपालप्रति अर्कै झोक चल्यो र उनले जनसभालाई आग्रह गर्दै भने, ‘म अस्थिरता होइन चुनाव चाहियो भन्छु तपाइहरु पनि म सँगसँगै भन्नुहोस्’, उनले थपे, ‘त्यसपछि म जनता के भन्छ भन्छु तपाइहरु चुनाव ले भन्छ भन्नुहोस् ।’ उनले अस्थिरता होइन के भनेका थिए जनमानसबाट व्यापक आवाजको वर्षा भयो । जनमानसबाट उनकै शब्दको गडगडाहट आएको थियो ‘अस्थिरता होइन ।’ त्यसपछि उनले चुनाव चाहियो भन्न सुरु गरे । अनि त झनै जनताको एउटा आवाज दुइटा सुनिएझैं सुनिन थाल्यो । उक्त जनसभामा ‘केपी ओली राजनेता’ भन्ने नारा समेत चलेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश : मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालय हेरफेर
चिनी खरीदका लागि सरकारले दिएन अनुमति
काठमाडौंको आकाशमा सलह किरा, कागले बनायो आहारा